आजको तस्बीर : को ठिक, पेटीमा समान राख्ने कि सडकमा सामान फ्याँक्ने ? – ebaglung.com
आजको तस्बीर : को ठिक, पेटीमा समान राख्ने कि सडकमा सामान फ्याँक्ने ?
२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार २२:२९	Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ २०७५ जेठ १३ । बागलुङ नगरपालिकाले आईतबार बिहान बागलुङ बजारका पसल अगाडी पेटीमा झुण्डाएका र राखेका व्यापारिक सामानहरु हटाउने अभियान सन्चालन गरिहँदा व्यापारीहरुले यसको तीब्र बिरोध त गरेनै यतिले नपुगी बजार बन्द नै गराएर शक्ति पदर्शन गरे । पूर्व सूचना नदिएरै बेइज्जतीपूर्वक सरसामान उठाएको र सडकको मध्य भागमा फ्याँकी दिएको आरोप पनि साथसाथै लगाए ।
यसै घटनालाई लिएर एक जना फेसबुक मित्र दीपक शर्माले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा व्यापारीका सामानहरु उठाएर गाडीमा लैजाँदै गर्दा व्यापारीहरुको बिरोध पछी मुख्य सडकको मध्यभागमा फ्याँकी दिएको केहि तस्बीरहरु खिचेर स्टाटस सहित पोष्ट गरेका छन् ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार व्यापारीहरुले पेटीमा राखेर सामानहरु उठाएर लैजादै गर्दा व्यापारीहरुले बिरोध गर्दा गाडीबाट प्रहरीले व्यापारीका सामानहरु सडकको बीचभागमा फ्याँकी दिएका थिए ।
व्यापारीका सामानहरु उठाएर लगिसके पछी या नगरपालिकाकै गोदाममा पु-याउनु पर्थ्यो, या सम्वन्धित व्यापारी कहाँ नै फिर्ता दिनु पर्थ्यो । उल्टै सार्वजनिक सडक नै अबरुद्ध हुने गरी सडकको मध्यभागमा फालिदिएर नगरपालिकाले के सन्देश दिन खोजेको हो बुझ्न सकिएन भन्छन् आम नगरवासी ।
नगरपालिकाको यस कार्यको बिरुद्ध आज व्यापारीहरुले बजार बन्द गराएका थिए ।
बडीगाड- ३ सिसाखानीमा काँग्रेस र जनमोर्चाको संयुक्त छायाँ सरकार !
जापानी नागरिक ओरिमाले गरे लाम्मेलाको सरस्वती आधारभुत विद्यालयलाई सहयोग !